24 | octobre | 2014 | filazantsaramada
“Aoka tsy hisy olona hanao tsinontsinona anao noho ny hatanoranao.” (1 Timoty 4:12).
‘Zatovo’ mira ‘fahasahiranana’: izany no fihevitry ny olona sasany. Kanefa hoy ny olona manam-pahendrena kokoa iray hoe, ”ireny no taranaka miantoka ny ho avy” (toy ny petra-bola any amin’ny banky). Tsy ho ela akory dia ho lasa olon-dehibe izy ireny, manamarina izay fandaniana maharitra (na ‘investissement’) rehetra natao taminy.
Timoty, ilay tanan-kavanan’i Paoly, dia taranaka mpivady samihafa finoana. Ny reniny, atao hoe Eunice, dia Kristiana, ary ny rainy dia Grika, tsy mbola niova ho Kristiana. Mety ho olana tamin’i Timoty zatovo izany, kanefa tsy nisy ny olana; ny tena antony dia satria ny reniny, izay nampian’ny renibeny Lois tamin’ny fitaizana azy, dia nameno izay tsy ampy rehetra teo amin’ny fiainany. Tsikaritry ny Apostoly ny “finoana tsy mihatsaravelatsihy” (1 Timoty 1:5) tao amin’i Eunice sy Lois, izay nampianatra an’i Timoty ny marina momba ny famonjena ao amin’ny Soratra Masina “hatry ny fony vao zaza” (2 Timoty 3:15). Nametra-panontaniana ny Mpanao Salamo manao hoe, “Inona no hiarovan’ny zatovo ny làlan-kalehany tsy ho voaloto?”. Ny valiny: “Ny fitandremana araka ny teninao.” (Salamo 119:9). Notandreman’i Timoty izany teny izany. Nino an’i Kristy ho Mpamonjiny izy, ka nahazo ny hery sy ny fahendrena hiaina mifanaraka amin’ny finoany. Mety ho nihevitra ny olona sasany fa tanora loatra i Timoty, raha atao hoe Pastora, ary noho izany, dia nandà ny handray am-po ny fananarany izy ireo. Paoly dia nampahery azy ho “mpanompo tsara an’i Kristy Jesosy” (1 Timoty 4:6), mampianatra ireto roroa ireto, dia ny Lalàna sy ny Filazantsara. Tokony tsy hisy avelany hampitahotra azy noho ny hatanoràny. Ny Tenin’Andriamanitra dia Tenin’Andriamanitra, na iza na iza mpampianatra mitondra ny fampianarana.
Aoka isika tsy hitsaratsara ny zatovo amin’izao andro ankehitriny izao, ary hahatsiaro fa misy tanora marobe toa an’i Timoty, manana finoana tsy mihatsaravelatsihy, mino an’i Jesosy Kristy ho Mpamonjiny ary vonona hanolotra ny fiainany ho Azy. Aoka isika hanana fanajàna ny tanora toy izany (tsy hanao tsinontsinona azy), amin’ny fisaorana an’Andriamanitra noho ny fananantsika azy.
Tsy misy didy hafa lehibe noho ny « FITIAVANA »
Nanomboka ny taona 2013 dia nivelatra tamin’ny lafiny fifaninanana ara-panatanjahan-tena (baolina kitra) ny fiaraha-miasan’ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny eny amin’ny Fonjaben’Antanimora. Teo aloha dia fotoam-bavaka fohy sy toriteny, fanentanana ireo voafonja hianatra sy handalina ny Tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) ary fanomezana sakafo izay iarahana amin’ireo Fikambanana hafa miasa eny amin’ny Fonja no niandraiketan’ny FF. Tanteraka soa aman-tsara izany fifaninanana lalao baolina kitra izany ho an’ny taona 2014. Efa nanomboka ny volana Septembra izany ary ny dingana famaranana dia notontosaina ny Alarobia 15 Oktobra 2014. Nanatrika io fotoam-pamaranana io moa Atoa Talen’ny FF Andrianasolo Jaona sy ny tompon’andraikitry ny programa eto amin’ny FF Atoa Rakoto Rabehajaina Louis, niaraka tamin’ireo « volontaires FF » eny amin’ny Fonja. Ho fampaherezana ireo voafonja dia nisy ny Tenin’Andriamanitra izay nentin’Atoa Tale nandritry io fotoana famaranana io. Izany dia nalaina tao amin’ny Marka 12:28-34. Ny hafatra nampitaina moa dia ny hoe: tsy misy didy hafa lehibe noho ny fitiavana an’Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Nomena « Fanion » misy ny sary famantarana ny FF ny Ekipa nandresy tamin’ny lalao famaranana ary nozaraina vary iray kilao avy isan’olona ny voafonja rehetra izay nandray anjara tamin’izao fifaninanana lalao baolina kitra izao. Nahatratra valopolo mahery (mpilalao sy mpitsara ary mpitantara) ny isan’izy ireo. Testamenta vaovao miisa 20 koa no natolotra mba hovakian’ireo mpianatra manaraka ny FSMI. Marihana fa nandritra ireo lalao fifanitsanana rehetra dia naranty tsy tapaka ny « banderole » mampahafantatra ny FMSI ary nisy hatrany koa ny fanentanana ireo voafonja marobe mpijery lalao mba hirosoan’izy ireo handalina ny Tenin’Andriamanitra, ilay Teny mamelona sy manafaka. Antenaina fa hitombo betsaka hatrany ny isan’ireo mpianatra vokatr’izao hetsika sy fanentanana izao.
“…tao an-tranomaizina Aho, dia novangianareo” Matio 25:36b
Testamenta vaovao miisa 20 no natolotra mba hovakian’ireo mpianatra manaraka ny FSMI
You are currently browsing the filazantsaramada blog archives for the day vendredi 24 octobre 2014.